Indwangu yomfaniswano wendiza yesikhwama sendiza abakhiqizi abasindi nabaphakeli | I-Yun Ai
Ulapha: ekhaya - Imikhiqizo - Indwangu yeshethi leyunifomu yendiza engasindi
Ukusetshenziswa okuhle: Le ndwangu yoqalo ilungele umfaniswano wehembe labasebenza endizeni, nokwakha izingubo zokugqoka zansuku zonke. Izinga layo eliphakeme lenza kube lula ukusebenzisana nokuthunga izingubo.
Ukuqina: indwangu yokugqoka ihembe ingu-57/58 ”Usayizi obanzi futhi yakhiwa ngo-50% we-polyester no-50% woqalo. Le ndwangu ihlala isikhathi eside ngokwakhiwa, ihlala isikhathi eside, ifinyeleleka kalula ukuwashwa nokunakekelwa.
Ukwakheka: 50% Polyester, 50% Bamboo
Into Cha: YA8129
Ukubala kwentambo: 50 × 50
Ubuningi: 150 × 90
Le ndwangu yomfaniswano wehembe eyenziwe uhhafu woqalo woqweqwe nengxenye ye-polyester fiber, izindinganiso eziqinile zekhwalithi ziyahlangatshezwa ukuqinisekisa ukulwa nokuchitheka, ukushesha kombala, ukulawula ukuncipha, isikhumba esinobungane nesiphetho esithambile.